Ukuthengwa kwexabiso leShishini le-Optical Tape kuMqulu omkhulu | KV Ukuncamathelisa
Inkokeli yoshishino lobunjineli yegumbi elicocekileyo elicocekileyo nelingenathuli iguqule ngempumelelo ibala lefilimu elisebenzayo ukuqala uhambo olutsha lokukhula. Ishishini lemveli lenkampani yi-R & D, imveliso kunye nentengiso yobunjineli belabhoratri ecocekileyo kunye neemveliso ezixhasayo. Igqibe malunga neeprojekthi ezili-100 zobunjineli begumbi elicocekileyo eTshayina. Ishishini ikakhulu libandakanya uyilo kunye nokwakhiwa kwegumbi elicocekileyo kakhulu, kunye ne-R & D, imveliso kunye neentengiso zokuxhasa uthuli kunye neeglavu ezichasene ne-static, iminqwazi kunye nezihlangu kunye nezinye izinto ezisetyenziswayo. Inqanaba lokucoca elicocekileyo lifikelela kwinqanaba le-10. Ukususela ngo-2013, inkampani iye yatshintsha ngokusebenzayo ukucwangciswa kwayo kwintsimi yezinto ezisebenzayo ezibhityileyo, ngokukodwa ukubeka imveliso yobuninzi befilimu ye-TAC optical film, ifilimu yeplastiki ye-aluminium, i-OCA tape kunye nezinye iimveliso. uhambo olutsha lokukhula.
Hlanganisa i-high-quality target yeshishini loshishino lwefilimu yeplastiki ye-aluminium, kwaye ubeke intsimi yesicelo sebhetri ye-lithium yamandla aphezulu. NgoJulayi 2016, inkampani yafumana i-aluminiyam-yeplastiki ehlanganisiweyo yefilimu yangaphandle yokupakisha ibhetri ye-lithium-ion phantsi kweJapan letterpress Co., Ltd. Ekupheleni kuka-2016, inkampani yenzelwe ukwandisa umthamo wemveliso ye-3 million square metres / ngenyanga e-Changzhou. Kulindeleke ukuba kufakwe kwimveliso kwikota yesithathu ka-2018. Emva kokuveliswa, inkampani iya kuba ne-aluminium-iplastiki yemveliso yefilimu ye-5 yezigidi zeemitha / ngenyanga, kwaye iimveliso zenkampani ziya kutshintsha ngokuthe ngcembe ukusuka ekusebenziseni i-lithium. -ion ​​ibhetri i-aluminium-plastiki ifilimu Ishishini le-membrane liyanda ukuya kumandla aphezulu e-lithium ibhetri ye-aluminium-plastiki ye-membrane field.
Ishishini lezinto zokusebenza ze-elektroniki liye landiswa ngokukhawuleza, kwaye ukuguquguquka kwentsebenzo yenkampani kuye kwandiswa ngenani elikhulu leemveliso. Ukususela kwinguqu kwi-2013, inkampani ityale imali ekwakhiweni kwezinto ezisebenzayo ze-elektroniki kwisiseko soshishino e-Changzhou. Imigca ye-11 yokuchaneka echanekileyo yeprojekthi yesigaba I ifakwe kwimveliso ekupheleni kwe-2015, ngokukodwa ukuvelisa ifilimu yokukhusela ukuhlanjululwa okuphezulu, ifilimu yobungqina bokuqhuma, i-tape enamacala amabini, i-optical tape, i-graphite yokushisa ukushisa kunye nezinye iimveliso ezisebenzayo. Kwangaxeshanye, inkampani ityale i-yuan eyi-1.12 yeebhiliyoni ukwakha iprojekthi yefilimu ye-TAC yezigidi ezingama-94, ekulindeleke ukuba ifakwe kwimveliso phakathi konyaka ka-2018. Inkampani Izixhobo zokusebenza ze-Electronic kunye neemveliso ezininzi zandisa ukuguquguquka kwentsebenzo yenkampani.
Kucetywa ukufumana i-100% ye-equity ye-Qianhong yombane ukwandisa ikhonkco lemizi-mveliso kunye nokwandisa inzuzo yokhuphiswano olubanzi kushishino. Inkampani iceba ukukhupha izabelo ezizigidi ezingama-55.7, inyuse i-yuan eyi-1.117 yeebhiliyoni, ihlawule i-338 yezigidi zeeyuan ngaxeshanye, kwaye ifumane i-100% ye-equity ye-Qianhong yombane. Ishishini eliphambili le-Qianhong electronic libandakanya iR & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwezixhobo zombane ezisebenzayo zabathengi. Ingumvelisi wokusika ezantsi kwezixhobo zefilimu ezisebenzayo. Abathengi abasezantsi be-Qianhong electronic baquka abavelisi beefowuni eziphathwayo zomgca wokuqala ezifana ne-oppo kunye ne-vivo, kunye ne-Dongfang Liangcai kunye noTshintsho oluchanekileyo (10.470, - 0.43, -3.94%) kunye nabanye ababoneleli kwintsimi ye-electronics yabathengi. I-Qianhong electronics yaba ngumthengisi oqeqeshiweyo we-AAC kunye neFoxconn eLangfang ngo-2017. I-Qianhong ye-elektroniki ithembisa ukufezekisa inzuzo efunyenwe ngumzali ukusuka ku-2017 ukuya ku-2019 engekho ngaphantsi kwe-yuan yezigidi ezili-110, i-yuan ye-150 yezigidi kunye ne-190 yezigidi ze-yuan ngokulandelelana. Emva kokufunyanwa kwee-elektroniki ze-Qianhong, inkampani yaqonda ukongezwa kwekhonkco lemizi-mveliso kwicandelo lee-elektroniki zabathengi, kwaye yaphucula inzuzo yokhuphiswano olubanzi kushishino.